မွဝတီ - ပဲခူးမြို့၌ Smart City အသစ်တည်ဆောက်ရန်ဆွေးနွေး
ပဲခူးမြို့၌ Smart City အသစ်တည်ဆောက်ရန်ဆွေးနွေး
Sunday, 06 August 2017 09:26 font size decrease font size increase font size
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်းအား ဂျပန်နိုင်ငံအခြေစိုက် F.A.P(Japan)Co.,Ltd. မှ Mr.Hiroyoshi Kawahara ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က ယမန်နေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲက တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဧည့်ခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံကြောင်း သိရသည်။
ရှေးဦးစွာ Mr.Hiroyoshi Kawahara က ပဲခူးမြို့ပေါ်ရှိ လမ်းမီးတိုင်များကို ဆိုလာစနစ်ဖြင့် တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ရေးနှင့် Smart City အသစ်တည်ဆောက်ရန်အတွက်လာ ရောက်တွေ့ ဆုံရခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့တည်ဆောက်မည့် Smart City တွင် ကျောင်းများ၊ စက်ရုံ/အလုပ်ရုံများ၊ ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းများ၊ အဆင့်မီဈေးဝယ်စင်တာများ၊လူနေအိမ်ရာများ၊ အပန်းဖြေပန်းခြံများ စသည်တို့ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး အဓိကအားဖြင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်စေ မည့်မြို့တော် ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားသည်။
ထို့နောက် တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကပဲခူးမြို့တွင်ဖွင့်လှစ်မည့် ပညာရေးဇုန်၌ လျှပ်စစ်မီး အတွက် ဆိုလာစနစ်များပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဓိကအားဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို မထိခိုက်စေသည့်မြို့ပြပေါ်ပေါက်လာစေရန်ရည်ရွယ်ကြောင်း၊ မြို့ပြစီမံကိန်းများ နှင့်ပတ် သက်ပြီး အနာဂတ်ကိုမျှော်မှန်းကာ အလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းနှင့် ယခုလို ပဲခူးမြို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လာရောက်တွေ့ဆုံမှုအပေါ် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြန် လည်ပြောကြားသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တိုင်းဒေသကြီးစက်မှု၊ လျှပ်စစ်နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးသန်းဝင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့် F.A.P(Japan)Co.,Ltd. မှကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Read 1172 times Last modified on Sunday, 06 August 2017 09:27
More in this category: « သစ်၊ မျောနှင့် ထင်းများကို မြစ်ကမ်း ကျေးရွာ ဒေသခံပြည်သူများအား ဖြန့်ဝေပေး ကုန်ဈေးနှုန်းကို မိုးကောင်းကင်နဲ့ တွဲမြင်တဲ့သူ..... »